Ningbo Hilectro Power Technology Co., Ltd iyona ibhizinisi eyinhloko Haitian-Drive, ngubani ezikhethekile yokukhiqiza i Forklift kagesi, Isitaki, landscape imoto, golfcart njll Le nkampani ukunamathela ifilosofi Haitian Iqembu "High Quality, ukusebenza kahle eliphezulu futhi amandla ukulondoloza ", futhi kuhloswe ngaso usinika imikhiqizo engcono kakhulu ekilasini ukuze amakhasimende.
Le nkampani elise Embonini Zone of Beilun okuyinto ingenye izimbobo ezinkulu emhlabeni wonke. Indawo izimboni usibekela 110 thous square metres. Ziphethe multi zokukhiqiza imigqa umthamo lakhe lonyaka iphelile 10 thous amasethi forklifts, inkampani eziphambili ukuhlolwa isikhungo ngesikhathi esifanayo.
Iqoqa ne abaqondisi professional, inkampani has a ekupheleni okusezingeni eliphezulu R & D Ithimba. Ngokuhlanganisa isipiliyoni ezifuywayo kwezilwandle, iqembu liyathuthuka izinga forklifts ngokuqhubekayo, futhi uzama ubalwe ku abahlinzeki phezulu kule mboni.